Isibopho sokunxephezela umonakalo kwabangenacala basePalestine - Rabi Michael Avraham
Isibopho sokukhokha isinxephezelo somonakalo kwabangenacala basePalestine
Izimpendulo > Isigaba: Okujwayelekile > Isibopho sokukhokha isinxephezelo somonakalo kwabangenacala basePalestine
Iphayini Ubuzwe ezinyangeni ezi-5 ezedlule
Ingabe ukhona umsebenzi kuHulumeni wakwa-Israyeli wokunxephezela abantu basePalestine abangenacala abalinyazwa izenzo zoMbuso wakwa-Israyeli ngokumelene neHamas?
Futhi omunye umbuzo, uma uwa Iphutha Esenzweni samandla athile, futhi ngenxa yephutha owalimala umPalestine, ingabe sikhona isibopho sokumnxephezela?
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe ezinyangeni ezi-5 ezedlule
Esihlokweni sami esiphathelene nenkinga yodonga oluvikelayo (umuntu ngamunye kanye nomphakathi), isiphetho siwukuthi uma bekungumuntu wesithathu (ongeyena owasePalestine) owalinyazwa yizenzo zethu, bengingasho yebo, bese iHamas ingamangalelwa. umonakalo. Kodwa endabeni yamaPalestine, kubukeka sengathi kufanele ajike aqonde ngqo kuHamas, ebalwelayo futhi umsebenzi wayo ozobanxephezela. Njengoba singekho isidingo sokunxephezela abantu esilwa nabo ngamasosha alinyazwe empini kungenasidingo. Kuthiwa uma kunempi ama-chips ayaqhuma.
Iphayini Uphendule ezinyangeni ezingu-5 ezedlule
Ngiyakhumbula kodwa futhi wabhala lapho ukuthi uma oshushiswayo ekwazi ukusindisa umshushisi kwesinye sezitho zakhe futhi akazange asindise kufanele. Kungani kungavumelekile lapha futhi mayelana namaphutha?
mikyab Abasebenzi	Uphendule ezinyangeni ezingu-5 ezedlule
Okokuqala, ubani owathi kwakuyisimo ayengasisindisa? Kunababaleki abasengozini abangenakugwema. Okwesibili, noma ngabe ikhona indlela yokugwema kulokhu kwenzeka amaphutha futhi ayingxenye yendlela yezwe lempi.
Indlela kaMaimonides iwukuthi ukubulala okunjalo akusona isibopho. Akuvumelekile kodwa akayena umbulali. Indlela yeThos ithi yebo.
UHasbra uthi uma ngilimaze impahla yomnikazi ngephutha asikho isidingo sokuthi ngimnxephezele. Futhi abanye owokuqala nowokugcina wabhala ukuthi kulowo oshushiswayo akukho nokuvinjelwa ukubulala ngisho nalapho engamsindisa kwesinye sezitho zakhe. Lokhu kushiwo kuphela ngomuntu wesithathu.
Uma kwenzeka isigameko lapho omunye wezithunywa zoMbuso wakwa-Israyeli (isosha/iphoyisa) ephambukile futhi wenza isenzo esinonya ngokumelene nesakhamuzi sasePalestine (ake sithi isosha lidlwengule umPalestine). Esimweni esinjalo, ingabe sikhona isibopho soMbuso wakwa-Israyeli sokunxephezela isisulu esifanayo sobugebengu?
Ngicabanga kanjalo. Bese kuba khona indawo yokumangalela isosha elizobuyisela imali kuhulumeni. Kodwa wenza ngokwamandla namandla (igunya nezikhali) amnikeza wona, ngakho unesibopho sezenzo zakhe.
Uma edlwengulwe mahhala, hhayi ngamandla ezikhali noma igunya alitholayo kodwa njenganoma yimuphi omunye umuntu, ngakho-ke ngokubona kwami ​​isimangalo siqondene naye futhi asikho isibopho kuhulumeni sokunxeshezelwa.
Ngokuqondene nesibopho sombuso, kuhambisana kanjani nalokhu okubhale ngenhla ukuthi umbuso awunacala ngamaphutha awo, kanti lapha ubhekene nobubi bezithunywa zawo (okuyinto ngokubona kombuso ukuthi akunjalo. kubhekwa njengononya).
Ngoba kukhulunywa ngomonakalo odalwe empini, futhi ngenxa yalokho akukho mthwalo ngoba kunomthetho ohlangene wokushushisa. Kodwa isenzo esingenamthetho esingeyona injongo yempi ngokuqinisekile sinomsebenzi wokunxephezela. Awukho umthetho wokushushisa lapha.
Icala elifuze leli liyaziwa ukuthi ngo-2000 uMustafa Dirani wamangalela uMbuso wakwa-Israel ngamademeshe, ethi uke wabhekana namacala amabili okunukubezwa ngokocansi ngabaphenyi bakhe. Phakathi kokunye, amaphepha abekwe icala athi isikhulu e-Unit 504, esidume ngelika-"Captain George," safaka lezi endunu kaDirani. NgokukaDirani, ngesikhathi ephekwa ngemibuzo wahlukunyezwa, okuhlanganisa ukuthuthumela, ukululazwa, ukushaywa, ukungalali kahle, nokuboshwa endaweni yokuguqa amahora amade, futhi ngenxa yokuhlazeka kwakhe waphekwa ngemibuzo enqunu . Amakhasethi ophenyo, athwetshulwa yi-Unit 504, aboniswa ohlelweni lwethelevishini "Iqiniso" ngoDisemba 15, 2011.  Kwenye yama-video, umphenyi uGeorge ubonakala ebiza omunye wabaseshi emyalela ukuthi afingqe ibhulukwe lakhe kuDirani futhi asabise uDirani ngokudlwengula uma enganikezi imininingwane. 
NgoJulayi 2011, iNkantolo Ephakeme yakhipha isinqumo, ngokombono weningi, ukuthi u-Dirani angaqhubeka nokuphishekela isimangalo sokuhlukumeza asifake ngokumelene noMbuso wakwa-Israyeli, nakuba ehlala endaweni eyizitha, futhi wabuyela ekuhilelekeni emisebenzini enenzondo ngokumelene nezwe. izwe  Ngokwesicelo sombuso, kwaphinde kwaqulwa icala, kwathi ngoMasingana wezi-2015 kwanqunywa ukuthi isicelo sikaDirani sichithwe, ngesizathu sokuthi ngemuva kokuba uDirani ekhululwe esitokisini wabuyela enhlanganweni yamaphekula inhloso yayo kwakuwukuthathela umbuso izinyathelo. ngisho nokulibhubhisa.
Kulokhu kubonakala ukuthi kukhona ukuhambisana nombuzo wokuthi ummangali uhlala endaweni eyizitha noma cha. Ngiyakhumbula futhi ukuthi kunomthethonqubo wezinsuku zomthetho wamaNgisi othi isitha asikwazi ukumangalela.
Izimpendulo zami azikho emthethweni (angiyena uchwepheshe wezomthetho wamazwe ngamazwe). Ngasho umbono wami ngezinga lokuziphatha.
Ngokuqondene noDirani, inkinga kwakungekhona ukuthi wayehlala endaweni yesitha kodwa wayeyisitha esinamandla. Noma ubani ohlala endaweni yesitha ngokuqinisekile angakwazi ukufuna isinxephezelo, kodwa kuphela uma kwenziwa okuthile kuye ngokungemthetho futhi hhayi esimweni sempi (okungukuthi, ukulimaza abantu abangenacala ngengozi). Ngicabanga ukuthi lezi zinhlupho azenzelwanga nje ukumhlukumeza kodwa ukuze kukhishwe ulwazi kuye. Ngakho-ke lezi izenzo ezifana nempi. Ukube bebesanda kumhlukumeza, noma bekusesikhungweni sakwa-GSS njengengxenye yophenyo, noma eseyisitha angakwazi ukucela isinxephezelo, kwaba yingxoxo leyo.
Ngendlela, impikiswano yokuthi uma ethatha isinyathelo sokucekela phansi umbuso imphuca ilungelo lokusebenzisa izikhungo zayo izwakala iyinto engabazekayo kimina. Wonke amasosha ayizitha (esithunjiwe) asesimweni esinjalo, futhi ngicabanga ukuthi akekho ongasho lokho ngesosha. Bakusho lokhu ngoDirani ngoba eyiphekula.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuphikisana lapha: uma ukuhlukunyezwa kudlulele ngaphezu kwalokho okuvunyelwe noma kwenziwa ngenjongo yodwa yokuhlukumeza, khona-ke ngisho noma u-Dirani engenalo ilungelo lokumangalela umbuso kufanele uphenye futhi ujezise labo abenza kanjalo (isijeziso sobugebengu, ngaphandle kokushushiswa kukaDirani). Futhi uma bengaphambuki - pho kusho ukuthini ukuthi uyisitha. Asikho isizathu sesenzo.
Shaja amaphekula isinxephezelo Uphendule ezinyangeni ezingu-5 ezedlule
B.S.D. XNUMX esizweni se-P.B
Kubukeka sengathi izinhlangano zamaphekula ezenzweni zazo zokubulala i-IDF idinga ukuthatha izinyathelo zokuzivikela nezokuvikela yizo ezikweleta isinxephezelo ngomonakalo odalwe ngesikhathi kuliwa izakhamuzi ezingenacala, amaJuda nama-Arab.
Ozithobayo, u-Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Cherries